Top: Gudoomiye Kaliil oo Muqdisho soo gaaray sheegayna Inuu usii gudbi doono Magaalada Kismaayo oo uu kaga qeyb-galaayo shir muhiim ah. – Kismaayo24 News Agency
Top: Gudoomiye Kaliil oo Muqdisho soo gaaray sheegayna Inuu usii gudbi doono Magaalada Kismaayo oo uu kaga qeyb-galaayo shir muhiim ah.
by admin 17th December 2015 2nd March 2016 0140
Gudoomiye Maxamed cabdi Kaliil oo Muqdisho soo gaaray Ayaa Warfidiyeenada kula hadlay garoonka aadan cadde ee Muqdisho, isagoo beeniyey war ay baahiyeen warbaahinta Qaar ee Magaalada Muqdisho,oo ahaa in laga soo masuufiriyay Gobolka Gedo.
Kaliil Ayaa dhinaca kale sheegay in maalmaha soo aadan ay u Duuli doonaan isaga Iyo siyaasiyiin kale Magaalada Kismaayo, halkaasi oo uu sheegay iney kaga qeyb gali doonaan shirka dib u heshiisiinta Beelaha jubooyinka oo dhawaan halkaasi ka furmaya.
Horay Muqdisho waxaa u joogay siyaasiyiin ay kamid yihiin col barre aadan shire hiiraale, xildhibaan Maxamuud Cali Magan, janaraal Cali Madoobe,cabdi shire, Cabdiwaaxid goonjeex, Sheekh Maxamed awlibaax, Maxamuud sayid aadan Iyo siyaasiyiin kale, kuwaas oo uu Mudane Kaliil sheegay iney wada gaari doonaan Magaalada Kismaayo.
Muqdisho waxaa horay isugu arkay siyaasiyintii mucaaradsanaa Jubaland Iyo Hogaamiyaha Jubba Axmed Madoobe.
Xog: K24 oo ogaatay Cida ka dambeysa Xariga wariye Karar Aadan Rukow oo wali ku xiran Magaalada Garbaharay.
Dhagayso:- Xabad Joojin Kadhaqan Gashay Magaalada Baladweyne
Wasiirka Amniga Jubbaland Nin dhacay Hanti ay lahaayeen Xildhibaano oo la qabtay
Mohamed Abdirashid Abaajo 11th February 2019
(AKHRISO)Mareykanka Oo Sheegay Inuu Duqeyn Ku Dilay Xubno Ka Tirsanaa Ciidamada Al-Shabaab
Sakariye Sakariye 28th February 2018